Fifandonana teny Ambohitrimanjaka: zandary 4 naratra mafy, olona 9 voasambotra | NewsMada
Par Taratra sur 18/10/2019
Nirefotra ny basy nandritra ny fifandonana teny Ambohitrimanjaka, omaly hariva. Nikasa hisambotra ireo olona nanimba sy nanary ny fitaovana hanamboarana ny tetikasa Tana-Masoandro ny zandary kanjo nodarohin’ireo andian’olona marobe. Vokany, zandary efatra naratra mafy raha olona sivy kosa voasambotra…
Notafihin’ny andian’olona marobe ireo zandary tonga hanao fisamborana ireo olona tompon’antoka tamin’ny fanimbana ny fitaovana hanamboarana ny tetikasa Tana-Masoandro eny amin’iny faritra Ambohitrimanjaka iny. Araka ny fanazavan’ny tale misahana ny angom-baovao eo anivon’ny zandarimariam-pirenena, ny Kly Ravoavy Zafisambatra, tamin’ny hariva teo (omaly io) efa nahazo fampilazana ny teo anivon’ny zandarimaria fa misy andian’olona nanimba sy nanary ireo fitaovana fanamboarana ny tetikasa Tana-Masoandro eny Ambohitrimanjaka tao amin’ny reniranon’Ikopa. Voamarina ny fisian’ireo olona nanary ny fitaovana tao amin’ny reniranon’Ikopa ireo taorian’ny fikarohana ka niroso tamin’ny fisamborana avy hatrany ny zandary. Nandritra ny fisamborana anefa no nisy andian’olona nanao herisetra tamin’ireo zandary ka tsy maintsy nanaparitaka ireo olona tamin’ny fitaovana teo am-pelatanana ireo zandary teny an-toerana, araka ny fanazavany hatrany. Vitsy ireo zandary teny an-toerana ka niharan’ny herisetran’ireo andian’olona. Vokany, zandary efatra naratra mafy.
Tafakatra sivy ireo olona voasambotra…
Tsy afa-nanoatra ireo zandary teny an-toerana nanoloana ireo andian’olona marobe ka voatery niantso namana avy hatrany. Raha ny fampitam-baovao voaray farany, omaly tamin’ny fotoana farany nanoratanay, tafakatra sivy ny isan’ireo olona voasambotra tamin’ity raharaha fanaovana herisetra tamina zandary ity. Nohamafisin’ny Kly Ravoavy hatrany fa nisy ny fandikan-dalàna nataon’ireo andian’olona ireo ary efa manao ny fanadihadiana rehetra momba ity raharaha ity ny zandary. Entanina, araka izany, ny rehetra mba tsy hanao izany herisetra izany, raha ny nambarany. Nentina namonjy hopitaly avy hatrany ireo zandary naratra ireo. Misy amin’izy ireo tena voa mafy noho ny daroka nataon’ireo andian’olona azy ireo. Tonga nankahery ireo zandary naratra ireo omaly, araka ny vaovao voaray ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena, ny Jly Ravalomanana Richard. Andrasana, araka izany, ny tohin’ity raharaha Ambohitrimanjaka ity.